देउवालाई ‘मनको बाघ’ ले खाँदा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलमा – Dcnepal
काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनको निजी स्वार्थका कारण सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकेको छैन।
संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदैछ ।तर सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु सम्भावित जित र हारलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी मिति तोक्न आनाकानी गरिराखेका छन्।
अहिलेसम्म सरकारको सुरसार हेर्दा सरकारले संविधान र ऐनको सानो अन्योलतामा खेलेर संविधानको मर्म माथि नै घात गर्ने हो कि? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु भन्दा दुई महिना अघिनै चुनाव गरिसक्नुपर्ने प्रवधान रहेको छ। त्यसैले अहिले सरकार र सत्तारूढ दलहरूले यही दाउमा खेल्न खोजिरहेका छन्।
संविधानले कुनै पनि तहमा सरकारविहीनताको परिकल्पना गरेकै छैन। त्यही भएरै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको हो । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल बैसाकमा संसदीय चुनाव गर्ने मनाशयमा रहेका छन्।
देउवालाई मनको बाघले खाँदा…
संविधानविद के भन्छन् ?
संविधानविद् टिकाराम भट्टराई पनि आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने आग्रह गर्नु संवैधानिक प्रक्रिया भएको बताउँछन्। र बैसाखमा निर्वाचन गर्नुनै संविधानको मर्म र भावना अनुसार भएको उनको तर्क रहेको छ।
‘त्यसकारण जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुन अगावै आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर ऐन संशोधन गरेर दल अनुकूलको निर्णय गरियो भने संविधानको मर्म विपरित हुन्छ।’